Mogadishu Journal » Ergay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xaalado adag kusoo arkay Doolow (Sawirro)
Ergay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xaalado adag kusoo arkay Doolow (Sawirro)
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Arrimaha Bani-aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, Md. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa safar shaqo maanta ku tagay magaalada Doolow ee gobolka Gedo.
Ergeyga waxaa safarka ku wehliya, ku xigeenka Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay Adam Abdelmoula oo sidoo kale ah Xiriiriyaha iyo Isuduwaha Hawlaha Bani’aadamnimada ee Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM).
Xubno ka socda Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku diba-ridka Arrimaha Bini’aadannimo [OCHA], ayaa sidoo kale ergayga ku wehliyay socdaalka shaqo, kaasoo ku qotoma u-kuur-galidda xaaladdaha abaaraha iyo nolosha danyarta abaaruhu saameeyeen.
Ugu horreyn ergeyga ayaa Maamulka gobolka iyo kan degmada ka dhageystay warbixinta xaaladaha abaareed ee ka taagan guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow oo dhacda koonfurta Soomaaliya.
Ergeygu wuxuu kormeer ku tagay, xeryo barakac oo ku yaalla gudaha iyo duleedka magaaada, Sida; Xerada Kabaaso, oo barakacayaasha ku jiraa u badan yihiin carruur, haween iyo dad da’ ah oo u baahan gargaar iyo garab istaag degdeg ah.
Doolow waa magaalo marti-galinaysa kumannaan qoys oo abaaruhu ceyrteeyeen, kadib afar xilli roobaad oo baaqday. cunto yarida iyo nafaqo-xumada ayaa la filayaa inay ka sii darto, haddii gargaarka bini’aadannimo aan kor loo qaadin lana joogteyn.
Dhawaan Warbaahinta ayaa si weyn u tabisay sheekooyinka Hooyo Xaawo Keerow oo gaajo awgeed diirka dhirta oo la tumey biyo kulul ku darsatey iyo Kaafiya Nuur oo ka dul-tagi weysay qabriga walaalaheed mataano ah, Ceebla iyo Cabdiya oo gaajo ugu geeriyooday Doolow.
Socdaalkaan ayaa ka dhigan midkii Saddexaad ee ergaygu ku tago gobollada dalka, isagoo u kuur-galaya xaaladaha bani’aadannimo, wuxuuna hore u booqday Baydhabo iyo Buulo-burde, oo barakacayaal baaxad leh oo ku sugan ay garab istaag buuxa u baahan yihiin.
Ergayga ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed kuwooda wax hasyta, Dowladda, deeq-bixiyaasha, hay’adaha Qaramada Midoobay iyo NGOs-ka caalamiga ah in ay degdeg gurmadka u gaar siiyaan dadka tabaalaysan, si macaluusha soo wajahan loga hor tago.
Dowladaha Somalia iyo Canada oo ka wadahadlay arrin muhiim ah (Daawo Sawirro)
Madaxweyne Alexandar oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Somalia (Sawiro)